विश्वकप फुटबलमा ३२ देश खेल्ने, यस्तो छ समुह विभाजन ! :: साझावोली न्यूज :: विश्वकप फुटबलमा ३२ देश खेल्ने, यस्तो छ समुह विभाजन !
बुधबार, असार १, २०७९ साझावोली न्यूज
काठमाडौं - सामान्यतया गर्मी मौसममा फिफा विश्वकप फुटबल आयोजना हुने गर्छ । यति बेला विश्वकप फुटबलको माहोल तात्नुपर्ने थियो । तर यस पटक आयोजक रहेको कतारमा गर्मी धेरै हुने भएकाले विश्वकप जाडो महिनामा सारियो ।
कतारमा २१ नोभेम्बरदेखि १८ डिसेम्बरसम्म हुने विश्वकप खेल्ने ३१ वटै टुंगो बल्ल लागेको छ । अन्तरमहादेशीय प्लेअफअन्तर्गत मंगलबार राति भएको खेलमा न्युजिल्याण्डलाई १(० ले हराएर कोस्टारिका विश्वकपमा स्थान बनाउने अन्तिम टिम बन्यो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १, २०७९ ११:३८